> Resource > DVD > Sida loo Guba cajalid Blu-ray (BD-R / RE) la ImgBurn u Free
Sida inta aan ka ogahay, ImgBurn waa software ugu wanaagsan ee DVD oo lacag la'aan ah ku gubanayso. Dhab ahaantii, waxa ay sidoo kale abuuri kartaa file image ISO ka DVD ama DVD fayl. Laakiin waa cajiib aad kara isticmaali ImgBurn ay gubaan cajalladaha Blu-ray , ugu yaraan ka fudud (ama fool xun) user interface, laakiin waa run in ImgBurn waa Blu-ray gubi cajalid xor ah (la jaan qaada BD R / RE). Waxaan doonayaa inaan dhan ku leeyahay qayb-: aad guys shaqo weyn, mahad ka qalbigayga samaynta sida aalad awood Blu-ray ku gubanayso.
Si aad u gubi disc ah Blu-ray la Blu-ray ImgBurn gubi lacag la'aan ah, hubi in aad diyaariyey fayl BD saxda ah (oo ay ku jiraan " BDMV "folder iyo" SHAHAADO "folder), oo aad ka soo xulay habka file xaq - UDF 2.5 ama ka sare hortiisa ka ololaya. Eeg tallaabooyinka faahfaahsan oo ay gubaan waxyaabaha Blu-ray in BD-R / disc RE ah.
Tallaabooyinka Easy in ay gubaan cajalid Blu-ray la ImgBurn
Tallaabo 1: Ku rakib iyo abuurtaan ImgBurn , ka dibna dooro ka shaashadda soo dhaweyn "Qor Files / fayl in cajalid".
Talaabada 2: From menu File, dooro "Browse u folder il ...", ama guji "Browse u gal ah" badhanka inay soo qaadaan wada hadal la mid ah.
o Talaabada 3: Hel "cajalid" folder ay ku jiraan waxyaabaha aad Blu-ray, oo sida caadiga ah waxaa ka mid ah laba subfolders: "BDMV" folder iyo "SHAHAADO" folder.
Talaabada 4: On guddi bidix, u tag Options tab iyo doortaan Nidaamka File iyo version (UDF 2.5 ama UDF 2.6 loo baahan yahay). Disc Blu-ray lama ciyaarin haddii aan la formatted sida UDF 2.5 ama ka dib.
Talaabada 5: Waa optional inay u dhigay, sumadaha cajalid Blu-ray, magaca iyo macluumaadka kale ee tab ay Labels.
Talaabada 6: Riix ah "ku qor Files" icon oo waxaa laguu keenay in doonaa daaqad weydiinaya haddii aad rabto in ay sii wadaan. Riix Haa si ay u gubaan disc Blu-ray isla markiiba. Marxaladani waxay overwrite doonaa content jira on disc Blu-ray, ama kaliya qoraal ka kooban si ay u maran disc Blu-ray.
Tallaabo 7: mar qoraal ah ayaa laga yaabaa in muddo dheer. Sug samir. Marka dhameysatay, aad disc la ciyaari karay in ciyaaryahanka disc wax set-top Blu-ray aqbala BD-R cajalladaha / RE.
Fiiro gaar ah: Si aad u ciyaaro ka fayl Blu-ray on PC, oo aad isticmaali karto ciyaaryahanka free Blu-ray inuu u ciyaaro filimada ku saabsan drive adag.
Blu-ray Gubidda Talo: Waa maxay BD-R / RE?
Waxay waa nooc oo waaweyn oo cajalladaha Blu-ray. BD-R cajalladaha waa warbaahinta mar-writable (sida DVD-R ama DVD + R). Cajalladaha BD-RE yihiin dib-u-writable Blu-ray warbaahinta (sida DVD-RW). Ugu ku saabsan qiimaha, BD-R cajalladaha weli yihiin kuwo aad u qaali ah si uu talinayaa in la isticmaalo BD-RES loo baaro iyo sida loo isticmaalo BD-R ay gubaan waxyaabaha joogtada ah.
More talooyin: Wondershare DVD Creator waa app sahlan in la isticmaalo DVD gubanaya, in kuu ogolaanayaa inaad si ay u gubaan ku dhowaad video kasta oo ay u DVDs, ama ka fayl DVD ama DVD iwm abuuro file ISO image Laakiin ogow in Wondershare DVD Creator guban kara disc Blu-ray .
Free download Windows ama Mac Wondershare DVD Converter:
Ma dajiyaan karaa mp4 ee DVD cirib? Tixgeli DVD Creator for Mac iyo Windows
Top 10 Zumba Fitness DVDs bilowga ah
Sidee baan u Record Or Guba TV muujiyaa gal DVD A?